Ikhaya - Iphepha-mvume lokuqhuba lam
Thenga amaXwebhu eNene kwi-Intanethi
Amaphepha-mvume okuqhuba kwi-Intanethi
Ipasipoti eyinyani / inkohliso
Amakhadi e-ID okwenyani / enkohliso
Inombolo Yokhuseleko Loluntu (SSN)
Ezomthetho / iiTayitile zomhlaba ezingeyonyani
IiNkcazo zeBhanki ezihleliweyo
Izatifikethi zeSikolo kunye neDiploma
Ilayisensi yoMqhubi ebhalisiweyo ngaphandle kweeMviwo
Faka isicelo sephepha-mvume lokuqhuba
Imvume Yokuqhuba Yamazwe Ngamazwe (IDP)
Xoxa amaxabiso eLayisensi yomqhubi
Iphepha-mvume lokuqhuba lethutyana
Hlaziya, Tshintshiselana ngeLayisensi yakho yokuqhuba
Thenga iPasipoti yesiBini
Myalelo wePaspoti yoZakuzo
Ikhadi eliluhlaza laseMelika kwi-Intanethi
Ipasipoti yokwenyani ekwi-Intanethi
Faka isicelo sePasipoti ekwi-Intanethi
Iindidi ze-DL A, B, C
Indlela yoku-odola kwi-Intanethi
Thenga iLayisensi yomqhubi kwi-Intanethi
Ungayiodola phi ilayisenisi yokuqhuba kwi-intanethi eYurophu Ngaba useJamani, okanye nayiphi na…
Thenga imvume yokuhlala kwi-Intanethi
Thenga iMvume yokuHlala esebenzayo kwi-Intanethi kwaye uhlale eYurophu, eMelika, eCanada kwi-MDL, unga...
Thenga ipasipoti yokwenyani ekwi-Intanethi
Ipaspoti yaseKhanada ekwi-Intanethi iyathengiswaFumana ipasipoti yokwenyani, esebenzayo yokwenyani yaseCanada enebhayometriki…
Uwahlawula njani amaXwebhu
Hlawula amaxwebhu ngeBitcoin Ngaba uyazi ngeBitcoin? Yeyona crypto ithembekileyo…
Thenga iReal Express Documents kwi-Intanethi
Ngaba ufuna uxwebhu kwi-intanethi kwaye ulifuna ngokukhawuleza? Ukukhangela kufuneka kuphelile! Apha kwi-MDL, sivelisa amaxwebhu akho nokuba awoqobo okanye awomgunyathi ngexesha elifutshane kakhulu. Singcono kakhulu njengoko sibonelela ngendlela ecacileyo yokufumana amaxwebhu ngaphandle kokuhamba inkqubo & neprothokholi ende. Ingaba ulunde ntoni?
Odola iiPassports ezibhalisiweyo
Sivelisa iincwadana zokundwendwela kumazwe angaphezu kwe-120. Eyona nto sigxile kuyo kuseYurophu, eUSA naseCanada. Ungajonga!
Jonga iipasi zethu
Thenga iDatabase ilayisenisi yokuqhuba ebhalisiweyo
Apha, ungaodola ilayisenisi yokuqhuba yokwenyani ngaphandle kokuthatha iimviwo. Imveliso idla ngokuthatha iintsuku ezi-3-5 zokusebenza!
Jonga iiLayisenisi zethu zokuqhuba
Iinkonzo zethu zamaxwebhu
ILayisensi yokuqhuba i-odolo ngaphandle koVavanyo luka-2022
Ngaba udiniwe kukwenza iimvavanyo zokuqhuba kunye neemviwo kodwa akukho mpumelelo? Ngaba uyayazi indlela yokuqhuba kodwa akukho layisensi yokuqhuba? Ukuba ujonge apho ungathenga khona ilayisenisi yokuqhuba kwi-intanethi ke yiyo le. Siliqela leengcali ze-IT ezikufumanela ilayisenisi yokwenene yokuqhuba ngeentsuku nje ezi-3-5 zokusebenza. Ungalitshintsha iphepha-mvume lakho lokuqhuba langaphandle, uhlaziye iphepha-mvume lakho lokuqhuba apha. Thina nje best. Ingaba ulunde ntoni? umyalelo ngoku
Thenga iPasipoti yokuHamba eBhalisiweyo
Ngaba ungumntu othanda ukuhamba? Ufuna indawo yokhuseleko? Into ekufuneka uyenzile kukuthenga ipasipoti yokwenyani kwi-intanethi apha. Sivelisa incwadana yakho yokundwendwela ngeentsuku ezi-5-6 zokusebenza. Ibhaliswe koovimba beenkcukacha zikarhulumente. Ukuba ufuna ipasipoti yomgunyathi, siya kukufumanela yona ngexabiso eliphantsi. Ipaspoti yomgunyathi ayibhaliswanga kuvimba weenkcukacha.Sivelisa iincwadana zokundwendwela kuwo onke amazwe ehlabathi ngaphandle kweBolivia. Myalelo ngoku.
Ikhadi lesazisi liyathengiswa
Ngaba ungaphantsi kweminyaka kwaye ufuna ukutyelela iiklabhu zasebusuku okanye iikhasino? Singakwenza oko ukuba kwenzeke apha ngokukufumana Amakhadi e-ID anokuskenwa kakhulu. Awufuni kwaziwa njengesaphuli-mthetho kwilizwe lakho, akunjalo? Thenga i-US, EU kunye ne-UK amakhadi esazisi kwi-intanethi apha kwaye wonge imali. Ikhadi lesazisi liyaveliswa kwaye libhaliswe ngeentsuku nje ezintathu. Ihanjiswa ngqo kumnyango wakho nge-DHL, i-UPS, i-EMS. Myalelo ngoku
Ixabiso leZatifikethi zeNCLEX ngo-2022
Ngokuqinisekileyo uyafuna ukuba ngumongikazi okanye abasebenzi bezonyango e-US kulo lonke ihlabathi, akunjalo? Ungagcina ixesha apha isicelo kunye nokuodola izatifikethi zeNCLEX kwi-MDL. Sikufumanela isatifikethi kwiintsuku nje ezi-2-3 zokusebenza. Iindleko ezisisiseko zokuthatha nokuba yeyiphi kwiimviwo ze-NCLEX yi-$200 ukuba ufuna ilayisenisi e-US Kuxhomekeke kwindawo ohlala kuyo, ibhodi yakho yokonga yelizwe lakho inokufuna iimali ezongezelelweyo zobhaliso. Kodwa apha, siyifumana ngokukhawuleza kunesiqhelo kwaye awuthathi naluphi na uvavanyo kungoko ixabiso eliphezulu. Myalelo ngoku
Ubumi buqinisekisiwe apha eMDL. Ngaba uyafuna ukuthenga iphepha-mvume lokuhlala kwi-intanethi? Ixesha kunye nendawo efanelekileyo. Apha, sikufumanela imvume yokuhlala ngeentsuku nje ezi-3-4 zokusebenza. Le mvume yokuhlala esiyivelisayo ngamaxabiso afanelekileyo. Sikwabonelela ngeemvume zokusebenza xa ufuna ukusebenza phesheya. Ukhululekile ukuba uhlale e-US, EU, UK, Australia kunye naliphi na ilizwekazi olikhethayo kamsinya emva kweveki enye emva kokuba uqhagamshelane nathi. Ngoba kutheni Nxibelelana ngoku kwaye ufumane imvume yokuhlala
Odola onke amaxwebhu ngeentsuku ezi-3
Kwi-MDL, sivelisa uluhlu olubanzi lweemveliso kunye neenkonzo. Sichaze nje ezimbalwa. Abanye amanye amaxwebhu sivelisa;
Ingxelo zeBhanki, Izatifikethi zoNyango, SSN, IELTS & TOEFL, IiTayitile zoMhlaba, IiDiploma zeSikolo kunye neZiqinisekiso njalo
Onke la maxwebhu akhankanywe ngasentla ayafumaneka apha. Siqinisekisa ukuba sikufumana eyona nto ingcono xa u-odola iZatifikethi kuthi. Myalelo ngoku
Bathini abanye babathengi bethu malunga neeNkonzo zethu zamaXwebhu
Ndandingaphumeleli kwiimvavanyo ezininzi zokuqhuba. Eli yayilixesha lam lokuqala ndifaka isicelo selayisensi yokwenyani yaseJamani yokuqhuba kunye nencwadana yokundwendwela ene-MDL. Kwakulula kakhulu kwaye basebenzisana nathi ukusombulula nayiphi na imiba ngokukhawuleza, kwanamaxwebhu alahlekileyo okanye alahlekileyo kwaye safumana iipasi zethu kunye neLayisensi yokuqhuba xa sasithenjisiwe. Iinkonzo ngokukhawuleza okukhulu Guys. Ndonwabe kakhulu!!! UJurgen Neuer D. Augsburg, eJamani
Kuqala ndacinga ukuba bubuqhophololo. Yonke into yenzeka ngokukhawuleza. Ndakhe ndaqhathwa 5,000 euros kwenye indawo. Ndiye ndagqiba ekubeni ndizame okokugqibela kwi-MDL. Amazulu amahle, bavelise ilayisenisi yam yokuqhuba yaseSweden ngeentsuku nje ezi-3. Kamva ndaya kwi-ofisi ye-Transportstyrelsen ukuya kukhangela kwaye yayibhalisiwe! Kanye njengomlingo !!! Namhlanje umyeni wam kunye nonyana wam ekugqibeleni bafumene ipasipoti yaseSweden kunye nelayisenisi yokuqhuba yaseRomania apha. Enkosi bafethu! Hug!!!
Molo, Nceda uzame ukukhawulezisa kwixesha elizayo. Ndiyalele imvume yokuhlala yaseKhanada- Ikhadi eliluhlaza kunye nesiqinisekiso somhlaba kuni bafana. Kuyabonakala ukuba uthathe ixesha elide kunoko belilindelwe. Ndiyavuya nangona ndifumene amaxwebhu am. Qhubeleka nomsebenzi omhle!
Ndinqwenela nje ukuthi enkosi bafethu. Ngoku ndingummi opheleleyo we-EU. Ngoku ndinePasipoti yam ye-EU (eBelgium), iSatifikethi sokuzalwa, iKhadi lesazisi kunye neLayisensi yokuqhuba. Ndingafuna amanye amaxwebhu kuwe. Ngoko ngokuqinisekileyo ndiya kuqhagamshelana nawe kwakhona. Ndiyabulela kakhulu. URita G. Brussels, BG.
URita G.Usomashishini olubhinqa
Bendiyikhangele indawo yokufumana ilayisenisi yokuPilot kunye nelayisenisi yeBoat kwi-intanethi ngaphandle koncedo. Enkosi kwi-MDL ekukuphela kwayo ebonelela ngezi nkonzo. Ziyoyikeka! Ngoku ndisebenzisa ilayisensi yokuLibatha yaBucala endiyifumene apha ngokukhululekileyo. Ndiza kukunika isikali seenkwenkwezi ezi-4.5! Andinakuninika nonke 5 kodwa...hahahaha!
UJim MorenoUmqhubi wabucala
UQinisekiso lweDatha kunye noKhuseleko
Amaxwebhu ethu oqobo avavanywa ngokungqongqo kwaye aqinisekisiwe. Nangona kunjalo, nabani na unokuluqinisekisa uxwebhu ngokusebenzisa iwebhusayithi karhulumente aze afake ikhowudi yeTelepoint okanye idiskiti yokuqinisekisa ebonelelwe kuxwebhu ngalunye. siyakuyalela ukuba wenze njani zonke ezi zinto xa u-odola amaxwebhu kuthi.
UBucala beDatha yoMthengi: Idatha yakho ikhuselekile kakhulu nathi. Asiyivezi naphi na ngaphandle kwemvume yakho. Ke njengomthengi wethu xa uthenga amaxwebhu oqobo okanye omgunyathi kuthi, ukhuselekile!
Izixhobo zethu ezintsonkothileyo:
Sinobudlelwane obuluqilima kunye nabameli bakarhulumente abasinika ezona mathiriyeli zifunekayo ukuvelisa amaxwebhu okwenene. Sisebenzisa imathiriyeli ekumgangatho ophezulu njengephepha elikhethekileyo, ushicilelo lwe-intaglio, ushicilelo oluncinci, kunye nedayi ye-fluorescent engabonakaliyo emehlweni e-ze kunye nolunye umatshini wokuvavanya. Nangona kunjalo, asikukhuthazi ukuba kubhalwe amaxwebhu omgunyathi kwaye sicebise abathengi bethu ukuba bafune amaxwebhu okwenene kuphela, iincwadana zokundwendwela, ii-ID, njl.njl ezinokuthi zifikeleleke nakwamanye amazwe.
Amaxwebhu ethu okwenene aveliswa kusetyenziswa yonke into ngobugocigoci kungoko; akukho mda wokungaphumeleli. Amaxwebhu ethu okwenene anawo onke amanqaku okhuseleko ayimfuneko avumela ukuba iphumelele kuwo onke amanqanaba ovavanyo lokuskena kunye nokuqinisekisa
Ubhaliso lweDatha yeBiometric:
Xa u-odola iincwadana zokundwendwela, ii-visa okanye amanye amaxwebhu kuthi, siyakubongoza ukuba unikeze oku kulandelayo: Sisebenzisa isazisi sakho esisodwa esiquka umnwe weminwe, ijometri yesandla, i-earlobe geometry, i-retina kunye neepateni ze-iris, amaza elizwi, i-DNA kunye nesignesha kwaye okufanayo kuhlaziyo isiseko sedatha sikarhulumente. Ngoko ke, ukuba iyafuneka, ulwazi lwakho lwebhayometriki lunokufikelelwa naphi na kusetyenziswa inkqubo yedatha karhulumente. Ukuba unayo nayiphi na into engahambelaniyo yolwazi okanye irekhodi elibi, iingcali zethu zinokuthi endaweni yazo zifake entsha kwaye ziyilungise emehlweni karhulumente.
Isilumkiso!!! Balumkele abarhwaphilizi kunye nobuqhophololo!
Baninzi ababoneleli ngamaxwebhu omgunyathi afumanekayo kwi-Intanethi ababonelela kuphela ngamaxwebhu angabizi kakhulu kunye nawomgunyathi afihlwe njengawokwenene. Lumka ngelixa uthenga amaxwebhu kwi-Intanethi njengoko impazamo yakho inokubangela ingxaki enkulu. Kodwa kunye nathi, ukhuselekile ngokupheleleyo. Siqinisekisa ukuba onke amaxwebhu ethu okwenyani akwi-100% yokwenyani kwaye abhaliswe kuvimba weenkcukacha karhulumente ahlangabezana nayo yonke imigangatho esemthethweni karhulumente. Ngaphandle koku, sikwaqinisekisa ukuba ulwazi lwakho luhlala lungaphakathi kuthi kunye nemigangatho emininzi yokhuseleko kunye nemfihlo. Ungajonga into yethu abathengi abanelisekile bathi ngathi. Ungalungisa idinga simahla kunye nabacebisi bethu abaziingcali ukukunceda ulungise iingxaki zakho. I-MDL yeyona ndawo ilungileyo kuwe!
Umgaqo-mboleko: Kuyo nayiphi na imeko amaxwebhu angekaziswa okanye ezinye iziphazamisi, 99.00% yemali yakho ibuyiselwa kuwe ngendlela yokuhlawula efanayo!
Isiqinisekiso sembuyiselo semali 99%
Ukwaneliseka kwabaThengi 97%
Imveliso yethu Amanani
Amaxwebhu aveliswa ngenyanga
Amaxwebhu ewonke avelisiweyo
Thenga ilayisensi ye-Boat eFlorida naseLondon
Faka isicelo selayisensi yomqhubi wenqwelomoya-MPL eYurophu
Ilayisensi yokwenene yePlay License PPL iyathengiswa
Uyithenga njani ilayisensi yoLawulo lweenqwelo moya-CPL kwi-Intanethi
Nxibelelana nathi apha uku-odola amaxwebhu akho
Umnxeba ex: +49 1521... *
Thenga ilayisensi yomqhubi ye-EU
Thenga iphepha-mvume lokuqhuba lase-UK
Thenga iLayisensi yokuqhuba yaseMelika
Amanye amaphepha-mvume okuqhuba
Guqula kulwimi lwakho
Ilungelo lokushicilela @MyDriversLicence. Onke Amalungelo Agciniwe.
Sithumele umyalezo nge-WhatsApp apha
Singakunceda njani nceda?